प्रदेशले 'फूल पावर एक्सरसाइज' गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ: १ नम्बर प्रदेश मुख्यमन्त्री शेरधन राई - Shikhar Post Shikhar Post
पहिलोपटक संघीय शासनमा छौं, प्रदेश सरकार सञ्चालनको कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ?
हो हामी नेपालको इतिहासमा पहिलो पल्ट संघीय शासन प्रणालीको प्रयोग, अभ्यास र अनुभव गरिरहेका छौं। स्वभाविक रूपमा नौलो अनुभूति हुने नै भयो। विगतका शासन प्रणालीमा केन्द्र र स्थानीय निकायका संरचनाहरू थिए। रेडिमेड संरचनामा काम गरेका अनुभवहरू थिए। बनिबनाउ संरचनामा काम गर्न धेरै हदसम्म सहज हुने नै भयो। हामीले गुन्द्री, पिरा र सुकुलमा बसेर काम थाल्नु परेको थियो। यसरी केही असहज जस्तो र बिल्कुल नौलो अनुभवका साथ काम शुरू गर्‍यौं। आधा कार्यकाल पूरा हुँदै गर्दा हामीले यस संरचनाको औचित्य र आवश्यकता पुष्टि गर्दै, कानूनी संरचनाहरू तयार गर्दै, काम गर्ने संरचनागत आधारहरू खडा गर्दै जनतामा संघीयता प्रतिको दरिलो आशा र विश्वास जगाउदै अगाडी बढिरहेका छौं।
प्रदेश सरकार सञ्चालनका क्रममा अप्ठयाराहरू के-के देखिएका छन् ?
नौलो संरचनामा काम गर्नु परेको हुनाले केही असहजता र अप्ठ्यारो महसुस त गर्नुपर्‍यो। तथापी मानसिक रूपमै तयार भएर जिम्मेवारी सम्हाल्न गएको कारण मैले धेरै अप्ठयारो महसुस गरिन। कतिपय कानूनहरू र मापदण्डहरू संघबाट नबनिसकेको अवस्थामा काम गर्न कठिनाई हुने नै भयो। अनि साझा अधिकारको सूचीसँग सम्बन्धित कुनै पनि कानूनहरू अहिलेसम्म नबन्दा झनै काम गर्न कठिन हुने नै भयो।
संघीय शासन सञ्चालनका लागि संघ र प्रदेशका कानूनहरू बाझिदाँ अथवा कानून नै नहुदाँ के कति अप्ठयारो परिरहेको छ ?
हो, अप्ठ्यारो नै यहीनेर छ। यही कारण हामी फटाफट हिड्न, दौडन र भने जस्तो काम गर्न सकिराखेका छैनौं। लोकसेवा, प्रदेश प्रहरी लगायत अन्य महत्वपूर्ण साझा अधिकारसँग सम्बन्धित कानून नबन्दा काम गर्न गाह्रो भइरहेको सत्य हो।
प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि मूख्य गरेर संघीय सरकारसँग नमिलेको विषय के हो ? समाधानका लागि लागि संघीय सरकारसँग के पहल भएको छ ?
प्रदेशले ‘फूल पावर एक्सरसाइज’ गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ। दोश्रो बाझिएका कानूनहरू र साझा अधिकार सूचीमा रहेका कानूनहरू छिटो बन्नुपर्छ। तेश्रो मझौला प्रकृतिका सबै योजना आयोजनाहरू स्रोतसहित प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। मैले र हामी सबैले गरिरहेको पहल र अपेक्षा नै यही हो।
संघीय सरकार जस्तै प्रदेश सरकारलाई पनि पुजिँगत खर्च पूरा गराउन किन सकिरहनु भएको छैन, तीब्र गतिमा किन विकास हुन सकेन ? के तपाईंहरूले गरेको काम जनताले अनुभूति गर्न सकेका छन् त ?
हामीले प्रदेशमा केन्द्रीय क्यालेण्डर परिवर्तन गरेका छौं। केन्द्रीय क्यालेण्डर पुरानो ढाँचामा आधारित छ। असारमा बजेट पारित गर्ने, मंसीर-पुषमा अख्तियारी पठाउने, अनि कार्यन्वयन वैशाखमा शुरू गरे जस्तो गर्ने र बडो हतारोका साथ जेठ र असारमा रातारात काम गर्ने, बजेट सकाउने र प्रगति रिपोर्ट बनाउने बाँकी समय हाजिरी बजाएर बस्ने।
यो परम्परागत क्यालेण्डर परिवर्तन नगरेसम्म विकास र बजेट खर्चको कुरा गफ मात्र हुन्थ्यो। त्यसैले प्रदेश १ मा शुरूबाटै आफ्नै क्यालेण्डर बनाएर बजेट पारित हुनेवित्तिकै अख्तियारी पठाउने, भदौ-असोजबाट काम शुरू गरेर जेठ मसान्तसम्ममा सकाउने, असारमा कुनै पनि बजेट रातारात खर्च नगर्नेगरी हामीले बजेट तथा कार्यक्रमको कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेका छौं। हामी पुँजीगत खर्च सबभन्दा बढी गर्न सक्ने प्रदेशमा परेका छौं। अन्य प्रदेशको पनि राम्रो छ। यस हिसावले भन्न सकिन्छ प्रदेश सरकारहरू बजेट खर्च गर्न राम्रो क्षमता राख्छन।
स्थानीय तहका सरकार र संघीय सरकारले नै सम्पूर्ण काम गरिरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकार आवश्यक नै थिएन र छैन भन्ने कहिलेकाँही लाग्छ कि लाग्दैन ?
कुरा त्यसो होइन, यदि कसैले यो कुरा भनिरहेको छ भने उसको बुझाईमा गम्भीर खोट छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। उसले संघीयता नबुझेर वा बुझ पचाएर संघीयतालाई कमजोर बनाउने र असफल बनाउने मनशायले त्यस्ता कुराहरू गरिरहेको छ। यथार्थमा नेपालको संघीयताको मुटु नै प्रदेश हो। केन्द्र र स्थानीय तहको अभ्यास धेरै लामो समयदेखि हामीले गर्दै आयौं। त्यही बनिबनाउ संरचनाहरूमा संघ र स्थानीय तहले काम गरिरहेका छन्।
स्थानीय तह र केन्द्र पहिल्यै थिए। त्यसैले संघीयता भनेकै प्रदेश हो। संघ हाम्रो देशको मुल छाना हो, प्रदेश मुल पिलर हो भने स्थानीय पालिकाहरू जग हुन्। तर, प्रदेश बिल्कुल नयाँ संरचनामा भएकाले सबैको ध्यान यसमा छ। संघ र स्थानीय तहको संरचनाबटै मुलुक र परिवर्तनका सम्पूर्ण उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्न सकिने भए तीन तहमा जानु पर्ने नै थिएन।
तपाईं मुख्यमन्त्री बनेपछि तपाईले गरेको मुख्य कामहरू के हो र गर्न बाँकी काम के छन् ?
मेरो नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको २८ महीनामा धेरै काम गरेको छ। छोटकरीमा केही कुरा राख्ने हो भने हामीले झण्डै चार दर्जन कानून बनायौं। अन्य दर्जनौ कार्यविधी र नियमावलीको तर्जुमा गर्‍यौं। हामीले प्रदेशको राजधानी सर्वसम्मतिबाट टुंग्यायौं। हामीले योजनाबद्व आधुनिक विकासको लागी प्रदेशको आवधिक योजना बनायौं। त्यसकै जगमा सन्तुलित ढंगबाट सडक, पुल, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ खेलकुद लगायतको क्षेत्रमा ठोस ढंगले कामहररुको थालनी गरेका छौ। ती कामहरू तीब्र गतिमा भइरहेका छन्।
प्रकाशित मिति : शुक्रबार, ९ आश्विन २०७७ १२:०८
सोलुखुम्बु । नेपाली कांग्रेस थुलुङदुधकोशी गाउँपालिकाले थुलुङदुधकोशी गाउँपालिकाको खर्च विवरण माग गरेको छ । गाउँपालिकाले गरेको विकास निर्माण कार्य र खर्च विवरणका बारेमा नागरिकको चासो र पार्टीले अध्ययन गर्ने भन्दै
प्रस्तावित राजदूतबारे गुनासो भए १० दिनभित्र उजुरी दिन आह्वान
काठमाडौँ– सङ्घीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समितिले संयुक्तराज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूतको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारले यही असोज १५ गते अमेरिकाका
काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । वार्ता टोली गठन गर्न दिएको ७२ घण्टे अल्टिमेटम सकिएलगतै संघले दबाबमुलक आन्दोलन घोषणा
खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण अब बैंकिङ प्रणालीमार्फत
सोलुखुम्बु । खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने काम सुरु गरेको छ । गाउँपालिकाले गत असोज १६ गतेको दिन सुचना जारी गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरुलाई